ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးမှုတွေ လျော့နည်းသွားရတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် မိုးယံဇွန် - Yangon Media Group
ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုများ ရပ်နားထားသလောက်ဖြစ် နေတဲ့ သရုပ်ဆောင်မိုးယံဇွန်နှင့် ခဏတာတွေ့ဆုံခြင်း..။
မေး- အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်ဖြစ် နေလဲ။
ဖြေ-ကျွန်တော် Myanmar Media7နဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးဖို့ လက်ခံထားတာတွေရှိတယ်။ နောက် MRTV Entertainment နဲ့ ကျွန်တော်ဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ခုရိုက်ကူးဖို့အတွက် လက်ခံထားတာလည်းရှိပါတယ်။
မေး-ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုတွေ အခု နောက်ပိုင်းမတွေ့ရဘူးနော်။
ဖြေ-ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ရေးတစ်ခုနဲ့ပဲလက်တွဲပြီးတော့ ဇာတ် ကားတွေရိုက်ကူးခဲ့တယ်။ နောက်ဈေးကွက်အနေအထားတွေအရ ခေတ်အနေအထားတွေအရ ကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီက ရိုက်ကူးရေးတွေရပ်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာတခြားကုမ္ပဏီ တွေက ကျွန်တော့်ကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက် လာကမ်းလှမ်းတဲ့အချိန်မှာ ကုမ္ပဏီနဲ့ပဲ အလုပ်တွေပြန် လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ စောင့်နေခဲ့တယ်။ မလိုက်ခဲ့ဘူး။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့အားနာမှုကြောင့် နစ်နာသွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်။ ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ကျတော့လည်း သူတို့ရဲ့ ကျေးဇူး တွေက ကျွန်တော့်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့အတွက် စောင့်နေခဲ့တာပါ။ ထုတ်လုပ်ရေးဘက်က ရပ်နားလိုက်ပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်က ကျန်နေသေးတဲ့အတွက် စောင့်နေခဲ့တယ်။
မေး-အခုဆိုရင် ဗီဒီယိုဈေးကွက်အနေအထားကလည်း တော်တော်ကိုရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအ နေမျိုးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာမျိုးရှိလဲ။
ဖြေ-ဈေးကွက်အနေအထားအရ အခွေဆိုင်တွေပိတ်ကြတယ်။ အဲဒီတော့ အနုပညာလောကကိုမှီခိုနေ ကြတဲ့စက်အဖွဲ့တွေ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရန်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ အသံတွေထွက်လာတယ်။ အဲဒါကခေတ် ကြောင့်ပါ။ အခုအဆိုးတွေကြုံလာ ရတယ်ဆိုပေမယ့် အကောင်းဆိုတာက ပြန်ကြုံရမှာပဲလေ။ အ ကောင်းတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်တုန်းကကျတော့ ဘယ်သူမှ အသံမထွက်ကြဘူး။ ဆိုးတဲ့အချိန် မှာညည်းကြတာက သဘာဝပါပဲ။ အဲဒီအပေါ်မှာ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှမပြောချင်ဘူး။ သူ့ဘာသာ သူလည်ပတ်နေတာပါပဲ။ ဘယ်သူ့ ဘယ်သူ့မှာမှ ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိပါဘူး။
ဖြေ- အကောင်းအဆိုးက ဒွန်တွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်လို့တော့ မရဘူး။ တစ်ခုပဲရှိတယ်။ ဒီလို မျိုးဆိုးတဲ့အခြေအနေကိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ အစောကြီးကတည်းက စနစ်တစ်ခုကိုတည်ထောင် ပြီးတော့ ကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကို ဦးတည်သွားလိမ့်မယ်။ အဓိကကတော့ ကောင်းတဲ့စနစ်ကို ဘယ်သူရွေးချယ်မလဲ။ အဲဒီစနစ်ကို ဘယ်သူကဖန်တီးမလဲဆိုတာကို ကျွန် တော်တို့ကစောင့်နေရတာပါ။ အဲဒါပဲ မျှော်လင့်လို့ရပါတယ်။
''ရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ကိုယ်တိုင်ရော ပရိသတ်တွေပါ ဘယ်အချိန်ပြန်ကြည့်ကြည့် အဆင်ပြေရမ?
မြဝတီမြို့တွင် လာမည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်း တိရစ္ဆာန်စာရင်းကောက် ယူရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင??